मिली १७२ ~ मत्ती, मार्क, लूका, जन, प्रेरित, रोमी, १ कोरिन्थी, २ कोरिन्थी, गलाती, एफिसी, फिलिप्पी, कलस्सी, १ थिस्सलोनिकी, २ थिस्सलोनिकी, १ तिमोथी, २ तिमोथी, तीतस, फिलेमोन, हिब्रू, जेम्स, १ पत्रुस, २ पत्रुस, १ यूहन्ना, २ यूहन्ना, ३ यूहन्ना, यहूदा, प्रकाश
अनि तिनले सबै मुख्‍य पूजाहारीहरू र जनताका शास्‍त्रीहरूलाई भेला गरे, र “ख्रीष्‍टको जन्‍म कहाँ हुने हो?” भनी सोधपूछ गरे।
कसरी उनले परमेश्‍वरको भवनभित्र पसेर चढ़ाइएको रोटी खाएथे? त्‍यो रोटी खान न त उनलाई न उनीसँग हुनेहरूलाई, तर केवल पूजाहारीहरूलाई मात्र उचित थियो।
अथवा के व्‍यवस्‍थामा पढ़ेका छैनौ, कसरी शबाथमा पूजाहारीहरूले मन्‍दिरमा शबाथलाई अपवित्र तुल्‍याउँछन्, र पनि निर्दोषी ठहरिन्‍छन्‌?
उहाँ कसरी यरूशलेममा जानुपर्छ, र धर्म-गुरु र मुख्‍य पूजाहारीहरू र शास्‍त्रीहरूबाट धेरै कष्‍ट भोग्‍नुपर्छ, मारिनुपर्छ र तेस्रो दिनमा जीवित भइउठ्‌नुपर्छ भनी उहाँले त्‍यस बेलादेखि आफ्‍ना चेलाहरूलाई बताउन थाल्‍नुभयो।
“हामी यरूशलेमतिर जाँदैछौं। अब मानिसको पुत्र मुख्‍य पूजाहारीहरू र शास्‍त्रीहरूका हातमा सुम्‍पिइनेछ, र तिनीहरूले उसलाई मृत्‍युदण्‍डको दोषी ठहराउनेछन्‌।
तर जब मुख्‍य पूजाहारीहरू र शास्‍त्रीहरूले चाहिँ उहाँले गर्नुभएका अचम्‍मका काम देखे, र केटाकेटीहरूले मन्‍दिरमा “दाऊदका पुत्रलाई होसन्‍ना” भन्‍दै चिच्‍च्‍याएका सुने, तब तिनीहरू क्रोधित भए,
उहाँ मन्‍दिरमा प्रवेश गर्नुभयो, अनि उहाँले शिक्षा दिनुहुँदा मुख्‍य पूजाहारीहरू र जनताका धर्म-गुरुहरू उहाँकहाँ आए, र भने, “कुन अधिकारले तिमी यी कामहरू गर्छौ, र कसले तिमीलाई यो अधिकार दियो?”
जब मुख्‍य पूजाहारीहरू र फरिसीहरूले उहाँका दृष्‍टान्‍त सुने, तब तिनीहरूकै विषयमा उहाँले यो भन्‍नुभएको हो भन्‍ने बुझे।
तब कैयाफा नामक प्रधान पूजाहारीको दरबारमा मुख्‍य पूजाहारीहरू र जनताका धर्म-गुरुहरू भेला भए।
तब बाह्रमध्‍ये एक जना यहूदा इस्‍करियोत भन्‍नेचाहिँ मुख्‍य पूजाहारीहरूकहाँ गयो,
उहाँ बोल्‍दाबोल्‍दै, बाह्रमध्‍येको एक जना, अर्थात्‌ यहूदा आयो। त्‍यससँग मुख्‍य पूजाहारीहरू र जनताका धर्म-गुरुहरूले पठाएका एउटा ठूलो भीड तरवार र लाठा लिएर आयो।
तर पत्रुस टाढ़ैबाट प्रधान पूजाहारीका भवनको आँगनसम्‍मै उहाँको पछिपछि लागे, र अन्‍त्‍यमा के हुने हो, सो हेर्नलाई भित्र पसेर पालेहरूसँग बसे।
तब प्रधान पूजाहारीले उठेर उहाँलाई भने, “के तँ केही जवाफ दिँदैनस्‌? यी मानिसहरूले तेरो विरुद्धमा दिएको गवाही के हो?”
तब प्रधान पूजाहारीले आफ्‍ना वस्‍त्र च्‍याते र भने, “यसले त ईश्‍वर-निन्‍दा बोल्‍यो। हामीलाई अब अरू साक्षीहरूको के दरकार पर्‍यो र? तपाईंहरूले अहिले यसले बोलेको ईश्‍वर-निन्‍दा सुनिहाल्‍नुभयो।
तब उहाँलाई पक्राउने यहूदाले उहाँमाथि दण्‍डाज्ञा भएको देखिकन पछुतो गर्‍यो, र मुख्‍य पूजाहारीहरू र धर्म-गुरुहरूलाई चाँदीका तीस सिक्‍का फिर्ता दिन ल्‍यायो,
तर मुख्‍य पूजाहारीहरूले चाँदीका ती सिक्‍काहरू लिएर भने, “ढुकुटीमा यो राख्‍न उचित छैन, किनकि यो रगतको मोल हो।”
अनि मुख्‍य पूजाहारीहरू र धर्म-गुरुहरूले उहाँमाथि दोष लगाए, तर उहाँले केही जवाफ दिनुभएन।
मुख्‍य पूजाहारीहरूले पनि शास्‍त्रीहरू र धर्म-गुरुहरूका सँगसँगै उहाँको गिल्‍ला गर्दै भने,
भोलिपल्‍ट, अर्थात्‌ तयारीको दिनको भोलिपल्‍ट, मुख्‍य पूजाहारीहरू र फरिसीहरू पिलातसकहाँ भेला भए,
जब ती स्‍त्रीहरू बाटैमा थिए, कोही-कोही पहरादारहरू सहरमा गएर मुख्‍य पूजाहारीलाई त्‍यहाँ भएका घटनाहरूका बारेमा खबर दिए।
जब मुख्‍य पूजाहारीहरू धर्म-गुरुहरूसँग भेला भए, तिनीहरूले सल्‍लाह गरे, र सिपाहीहरूलाई यसो भनेर धेरै पैसा दिए,
“हेर, तिमीले यो कसैलाई नभन्‍नू, तर गएर तिमी आफैलाई पूजाहारीकहाँ देखाऊ र तिमी निको भएकोमा मानिसहरूका प्रमाणको लागि मोशाको आज्ञाबमोजिम बलि चढ़ाऊ।”
प्रधान पूजाहारी अबियाथारको पालोमा परमेश्‍वरको भवनमा तिनी पसे, र परमेश्‍वरलाई चढ़ाइएको रोटी खाए, जो पूजाहारीले बाहेक अरूले खान अनुचित छ, र त्‍यो रोटी तिनको साथमा हुनेहरूलाई पनि दिए।”
“मानिसको पुत्रले धेरै दुःख भोग्‍नु, र धर्म-गुरुहरू, मुख्‍य पूजाहारीहरू र शास्‍त्रीहरूबाट इन्‍कार गरिनु र मारिनु अनि तीन दिनपछि जीवित भई उठ्‌नु आवश्‍यक छ” भनेर उहाँले तिनीहरूलाई सिकाउन लाग्‍नुभयो।
उहाँले भन्‍नुभयो, “हेर, हामी यरूशलेमतिर जाँदैछौं। त्‍यहाँ मानिसको पुत्रलाई मुख्‍य पूजाहारीहरू र शास्‍त्रीहरूकहाँ सुम्‍पिदिइनेछ, र तिनीहरूले उसलाई मृत्‍युदण्‍ड दिनेछन्, र अन्‍यजातिहरूका हातमा सुम्‍पिदिनेछन्‌।
अनि मुख्‍य पूजाहारीहरू र शास्‍त्रीहरूले यो सुनेर उहाँलाई कसरी नाश पारौं भनी उपाय खोज्‍न लागे। किनभने तिनीहरू उहाँसँग डराउँथे, किनकि सारा भीड़ले उहाँको शिक्षामा अचम्‍म मानेका थिए।
यसको दुई दिनपछि निस्‍तार र अखमिरी रोटीको चाड थियो। मुख्‍य पूजाहारीहरू र शास्‍त्रीहरू उहाँलाई कसरी छलद्वारा पक्रेर मारौं भन्‍ने दाउमा थिए।
त्‍यहाँ नजिक उभिनेहरूमध्‍ये कुनै एउटाले तरवार थुतेर प्रधान पूजाहारीको कमारालाई प्रहार गर्‍यो, र त्‍यसको कान च्‍वाट्ट काटिदियो।
पत्रुसचाहिँ टाढ़ैबाट प्रधान पूजाहारीको आँगनभित्र उहाँको पछिपछि लागे, अनि त्‍यहाँ सिपाहीहरूसँग बसेर तिनी आगो ताप्‍न लागे।
तब प्रधान पूजाहारीले आफ्‍नो वस्‍त्र च्‍यातेर भने, “हामीलाई अरू साक्षीहरूको के दरकार पर्‍यो र?
पत्रुस तल आँगनमा हुँदा प्रधान पूजाहारीका नोकर्नीहरूमध्‍ये एक जना त्‍यहाँ आई,
मुख्‍य पूजाहारीहरूले उहाँमाथि धेरै कुराको दोष लगाए।
तर बरु बारब्‍बालाई तिनीहरूका निम्‍ति उनले छोडिदेऊन्‌ भनेर मुख्‍य पूजाहारीहरूले भीड़लाई सुर्‍याए।
त्‍यसै गरी मुख्‍य पूजाहारीहरूले पनि शास्‍त्रीहरूसँग यसो भन्‍दै आपसमा उहाँको ठट्टा गरे, “यसले अरूलाई बचायो, तर आफूलाई चाहिँ बचाउन सक्‍दैन।
यहूदियाका राजा, हेरोदको पालोमा, अबियाका दलका जकरिया नाउँ भएका एक जना पूजाहारी थिए। तिनकी पत्‍नी हारून-वंशकी थिइन्‌। तिनको नाउँ एलीशिबा थियो।
जब जकरिया परमेश्‍वरको सामुन्‍ने आफ्‍ना दलको पालोमा पूजाहारी काम गरिरहेका थिए,
तब पूजाहारीका सेवाको रीतअनुसार चिट्ठा हाल्‍दा परमप्रभुको मन्‍दिरभित्र पसेर धूप बाल्‍ने काम जकरियालाई पर्‍यो।
हन्‍नास र कैयाफाका प्रधान पूजाहारीगिरीको समयमा परमेश्‍वरको वचन उजाड-स्‍थानमा जकरियाका छोरा यूहन्‍नाकहाँ आयो।
उहाँले तिनलाई आदेश दिनुभयो, “यो कसैलाई नभन। तर गएर पूजाहारीकहाँ आफैलाई देखाऊ र मोशाले आज्ञा गरेबमोजिम मानिसहरूलाई तिमी निको भएको प्रमाणको निम्‍ति भेटी चढ़ाऊ।”
कसरी परमेश्‍वरको घरमा पसेर अर्पण गरिएको रोटी झिकेर तिनले खाए, र तिनीसँग हुनेहरूलाई पनि दिए, जो पूजाहारीहरूलाई बाहेक अरूलाई खान निषेध थियो।”
अनि उहाँले भन्‍नुभयो, “मानिसको पुत्रले धेरै दुःख उठाउनुपर्छ, र उनी धर्म-गुरुहरू, मुख्‍य पूजाहारीहरू र शास्‍त्रीहरूबाट बहिष्‍कृत हुनेछ, मारिनेछ र तेस्रो दिनमा मृतकबाट जीवित भई उठ्‌नेछ।”
संयोगले एक जना पूजाहारी त्‍यही बाटो भएर जाँदैथियो, र त्‍यो अधमरो मान्‍छेलाई देखेर त्‍यो अर्कोपट्टि तर्केर गयो।
उहाँले तिनीहरूलाई देखेर भन्‍नुभयो, “जाओ, गएर पूजाहारीकहाँ आफैलाई देखाओ।” तिनीहरू जाँदाजाँदै निको भइहाले।
उहाँले दिनहुँ मन्‍दिरमा शिक्षा दिँदैहुनुहुन्‍थ्‍यो। तर मुख्‍य पूजाहारीहरू, शास्‍त्रीहरू र जनताका प्रमुख मानिसहरूले उहाँलाई मार्न खोज्‍थे।
एक दिन मन्‍दिरमा उहाँले मानिसहरूलाई शिक्षा दिइरहनुभएको थियो, र तिनीहरूलाई सुसमाचार प्रचार गरिरहनुभएको थियो। धर्म-गुरुहरूका साथमा मुख्‍य पूजाहारीहरू र शास्‍त्रीहरू उहाँकहाँ आए,
तब शास्‍त्रीहरू र मुख्‍य पूजाहारीहरूले त्‍यसै बेला उहाँलाई पक्रन खोजे। तिनीहरूलाई थाहा थियो कि यो दृष्‍टान्‍त तिनीहरूकै विरुद्धमा भनिएको थियो तर तिनीहरू मानिसहरूसँग डराउँथे।
मुख्‍य पूजाहारीहरू र शास्‍त्रीहरूले उहाँलाई कसरी मारौं भनी मौका खोज्‍थे, तर मानिसहरूदेखि तिनीहरू डराउँथे।
तिनीहरूका हातमा उहाँलाई कसरी पक्राइदिनु भनी मुख्‍य पूजाहारीहरू र कप्‍तानहरूकहाँ गएर त्‍यसले सल्‍लाह गर्‍यो।
तिनीहरूमध्‍ये एक जनाले प्रधान पूजाहारीको नोकरलाई हान्‍यो, र त्‍यसको दाहिने कान च्‍वाट्टै काटिदियो।
अनि उहाँको विरुद्धमा आएका मुख्‍य पूजाहारीहरू, मन्‍दिरका कप्‍तानहरू, र धर्म-गुरुहरूलाई उहाँले भन्‍नुभयो, “के तपाईंहरू डाँकूको विरुद्धमा आएजस्‍तै तरवार र लाठाहरू लिएर आउनुभयो?
उज्‍यालो हुने बित्तिकै भेला भएका जनताका धर्म-गुरुहरू, मुख्‍य पूजाहारीहरू र शास्‍त्रीहरू दुवैले उहाँलाई आफ्‍नो महासभामा लगे,
तब पिलातसले मुख्‍य पूजाहारीहरू र भीड़हरूलाई भने, “म यी मानिसमा केही दोष भेट्टाउँदिनँ।”
मुख्‍य पूजाहारीहरू र शास्‍त्रीहरूचाहिँ खड़ा भएर उहाँलाई जोड़तोड़साथ दोष लाउन लागे।
तब पिलातसले मुख्‍य पूजाहारीहरू, शासकहरू, र जनतालाई जम्‍मा गरे।
तर मुख्‍य पूजाहारीहरू र हाम्रा शासकहरूले उहाँलाई मृत्‍युदण्‍डको निम्‍ति सुम्‍पिदिए, र उहाँलाई क्रूसमा टाँगे।
जब यरूशलेमबाट यहूदीहरूले पूजाहारीहरू र लेवीहरूलाई उनीकहाँ “तिमी को हौ?” भन्‍ने कुरा सोध्‍न पठाए, तब यूहन्‍नाको गवाही यो थियो।
भीड़ले उहाँको विषयमा चर्चा गरिरहेको फरिसीहरूले सुने। तब मुख्‍य पूजाहारीहरू र फरिसीहरूले उहाँलाई पक्रन मन्‍दिरका पहरेदारहरू पठाए।
तब मन्‍दिरका पहरेदारहरू मुख्‍य पूजाहारीहरू र फरिसीहरूकहाँ आए। तिनीहरूले यिनीहरूलाई भने “तिमीहरूले त्‍यसलाई किन ल्‍याएनौ?”
तब मुख्‍य पूजाहारीहरू र फरिसीहरूले महासभाका सदस्‍यहरूलाई बोलाए र तिनलाई भने, “अब हामी के गरौं? किनभने यस मानिसले त धेरै चिन्‍हहरू गरिरहेछ।
तर तिनीहरूमध्‍ये एक जना, कैयाफा, जो त्‍यस वर्षका प्रधान पूजाहारी थिए, उनले तिनीहरूलाई भने, “तिमीहरू केही पनि जान्‍दैनौ!
यसैले मुख्‍य पूजाहारीहरूले लाजरसलाई पनि मार्ने मतो गरे।
तब बत्ती, राँको र हतियारहरू लिएका सिपाहीहरूको एक दल र मुख्‍य पूजाहारी र फरिसीहरूले पठाएका पहरेदारहरू लिएर यहूदा त्‍यहाँ आयो।
सिमोन पत्रुसले आफूसँग भएको तरवार निकालेर मुख्‍य पूजाहारीको कमारालाई प्रहार गरे र त्‍यसको दाहिने कान च्‍वाट्टै काटिदिए। त्‍यस कमाराको नाउँ माल्‍खस थियो।
पहिले तिनीहरूले उहाँलाई हन्‍नासकहाँ लगे, जो त्‍यस सालका प्रधान पूजाहारी कैयाफाका ससुरा थिए।
तर पत्रुस बाहिर ढोकामा उभिरहेका थिए। ती अर्काचाहिँ चेलाले, जो प्रधान पूजाहारीका चिनारु थिए, बाहिर निस्‍केर ढोकामा बस्‍ने ठिटीलाई भनेर पत्रुसलाई भित्र ल्‍याए।
तब हन्‍नासले उहाँलाई बाधिँएकै अवस्‍थामा प्रधान पूजाहारी कैयाफाकहाँ पठाए।
प्रधान पूजाहारीका कमाराहरूमध्‍ये एक जना, जसका नातेदारको कान पत्रुसले काटेका थिए, त्‍यसले सोध्‍यो, “के मैले तिमीलाई तिनीसँग बगैँचामा देखिनँ र?”
पिलातसले जवाफ दिए, “के म यहूदी हुँ र? तिम्रै जाति र मुख्‍य पूजाहारीहरूले तिमीलाई मेरो हातमा सुम्‍पिदिए। तिमीले के गर्‍यौ?”
जब मुख्‍य पूजाहारीहरू र पहरेदारहरूले उहाँलाई देखे, तिनीहरू यसो भन्‍दै चिच्‍च्‍याउन लागे, “त्‍यसलाई क्रूसमा टाँग्‍नुहोस्, त्‍यसलाई क्रूसमा टाँग्‍नुहोस्‌!” पिलातसले तिनीहरूलाई भने, “तिमीहरूले नै यिनलाई लगेर क्रूसमा टाँग, किनभने म यिनमा केही दोष पाउँदिनँ!”
तर तिनीहरू यसो भन्‍दै चिच्‍च्‍याए, “लैजानुहोस्, लैजानुहोस्, त्‍यसलाई क्रूसमा टाँग्‍नुहोस्‌!” पिलातसले तिनीहरूलाई सोधे, “के म तिमीहरूका राजालाई क्रूसमा टाँगूँ?” मुख्‍य पूजाहारीहरूले जवाफ दिए, “कैसरबाहेक हाम्रो अरू राजा छैन।”
यहूदीहरूका मुख्‍य पूजाहारीहरूले पिलातसलाई भने, “‘यहूदीहरूका राजा’ भन्‍ने होइन, तर ‘यसले म यहूदीहरूका राजा हुँ भन्‍यो’ भनी लेख्‍नुहोस्‌।”
पत्रुस र यूहन्‍ना मानिसहरूसँग बोल्‍दै नै थिए, पूजाहारीहरू, मन्‍दिरका कप्‍तान र सदुकीहरू तिनीहरूकहाँ आए।
प्रधान पूजाहारी हन्‍नास, कैयाफा, यूहन्‍ना, अलेक्‍जेन्‍डर र प्रधान पूजाहारीका परिवारका जम्‍मै त्‍यहाँ थिए।
छुटकारा पाएर तिनीहरू आफ्‍ना साथीहरूकहाँ आए, र मुख्‍य पूजाहारीहरू र धर्म-गुरुहरूले भनेका सबै कुराहरू उनीहरूलाई बताइदिए।
प्रधान पूजाहारी र तिनीसँग हुने सबै (जो सदुकी पन्‍थका थिए) डाहले भरिएर प्रेरितहरूका विरुद्धमा खड़ा भए,
यो सुनेपछि तिनीहरू एकाबिहानै मन्‍दिरभित्र पसे र शिक्षा दिन थाले। तर प्रधान पूजाहारी र तिनीसँग हुनेहरू आए, र महासभा, अर्थात्‌ इस्राएलीहरूको सम्‍पूर्ण सभाका सबैलाई बोलाए, र प्रेरितहरूलाई झ्‍यालखानबाट ल्‍याउन मानिसहरू पठाए।
जब मन्‍दिरका कप्‍तान र मुख्‍य पूजाहारीहरूले यो खबर सुने तब यी सबको नतीजा के हुने हो भनी तिनीहरू प्रेरितहरूका विषयमा अन्‍योलमा परे।
उनीहरूले तिनीहरूलाई ल्‍याएर महासभाको अगाडि खड़ा गराए, र प्रधान पूजाहारीले तिनीहरूलाई सोधे,
परमेश्‍वरको वचन बढ्‌दैगयो, र चेलाहरूको संख्‍या यरूशलेममा अत्‍यन्‍तै बढ़्यो। पूजाहारीहरूमध्‍ये धेरै जनाले यस विश्‍वासलाई ग्रहण गरे।
तब प्रधान पूजाहारीले सोधे, “के यी कुरा ठीक हुन्‌?”
शाऊल प्रभुका चेलाहरूका विरुद्धमा अझ पनि धम्‍की र हत्‍याको धुनमा प्रधान पूजाहारीकहाँ गए,
यहाँ पनि तपाईंको नाउँ लिने सबैलाई बाँध्‍ने अधिकार मुख्‍य पूजाहारीहरूबाट तिनले पाएका छन्‌।”
तब सुन्‍नेहरू जति सबैले अचम्‍म मानेर भने, “यो नाउँ लिने जतिलाई यरूशलेममा संहार गर्ने र यहाँ पनि तिनीहरूलाई बाँधेर मुख्‍य पूजाहारीहरूकहाँ लैजाने अभिप्रायले आउने यही होइन र?”
सहरको अगिल्‍तिर भएको जिउसको मन्‍दिरका पूजाहारीले मूल ढोकाहरूमा गोरुहरू र फूलका मालाहरू ल्‍याएर त्‍यहाँका मानिसहरूसँग मिली बलि-पूजा गर्ने इच्‍छा गरे।
यी कुरा भनेर तिनीहरूले मुश्‍किलले तिनीहरूलाई बलि-पूजा चढ़ाउनबाट ती मानिसहरूलाई रोके।
तर तिनीहरूलाई यी कुरा लेखिदिऔं, कि तिनीहरू मूर्तिपूजाको अशुद्धताबाट अलग्‍ग रहून्, व्‍यभिचारबाट, घोक्रो अँठ्याएर मारेको पशुको मासु र रगतबाट अलग्‍ग रहून्‌।
त्‍यहाँ एक जना स्‍केवास नाउँ भएको यहूदी प्रधान पूजाहारीका सात जना छोराहरूले यसो गर्थे।
प्रधान पूजाहारी र जम्‍मै महासभाले पनि मेरो पक्षमा गवाही दिन्‍छन्‌। उहाँहरूकै तर्फबाट भाइहरूका नाउँमा पुर्जी पाएर म त्‍यहाँ भएका विश्‍वासीहरूलाई बाँधेर यरूशलेममा ल्‍याई सजाय दिलाउन दमस्‍कसमा गएको थिएँ।
तर भोलिपल्‍ट यहूदीहरूले पावललाई कुन खास कारणले दोष लाएका थिए सो बुझ्‍ने इच्‍छाले तिनलाई फुकाइदिए, र सबै मुख्‍य पूजाहारीहरू र महासभालाई जम्‍मा हुने आज्ञा गरे, अनि पावललाई तल ल्‍याई तिनीहरूका सामुन्‍ने खड़ा गरे।
यस कुरामा प्रधान पूजाहारी हननियाले तिनको छेउमा उभिनेहरूलाई मुखमा हिर्काउने हुकुम दिए।
अनि छेउमा उभिनेहरूले भने, “के तँ परमेश्‍वरका प्रधान पूजाहारीको अपमान गर्छस्‌?”
तब पावलले भने, “भाइ हो, उहाँ प्रधान पूजाहारी हुनुहुन्‍छ भन्‍ने मलाई थाहा थिएन। किनकि लेखिएको छ, ‘तैंले आफ्‍ना जनताका शासकको खराबी नबोल्‍नू’।”
यिनीहरूले मुख्‍य पूजाहारीहरू र धर्म-गुरुहरूकहाँ गएर भने, “पावलको हत्‍या नगरेसम्‍म हामी केही खानेछैनौं भनी हामीले दृढ़ शपथ खाएका छौं।
पाँच दिनपछि प्रधान पूजाहारी हननिया र कतिपय धर्म-गुरुहरू, तर्तुल्‍लस नाउँका एक जना वकीलसँग त्‍यहाँ आए, र तिनीहरूले पावलको विरुद्ध हाकिमको अगि मुद्दा पेश गरे।
मुख्‍य पूजाहारीहरू र यहूदीहरूका प्रमुख मानिसहरूले पावलको विरुद्धमा अभियोग लाए,
जसको बारेमा, म यरूशलेममा छँदा, मुख्‍य पूजाहारीहरू र यहूदीहरूका धर्म-गुरुहरूले त्‍यसको विरुद्धमा अभियोग लाएर त्‍यसलाई दण्‍ड दिनुपर्छ भनी अनुरोध गरेका थिए।
मैले यरूशलेममा त्‍यसै गरें, र मुख्‍य पूजाहारीहरूबाट अख्‍तियार पाएर धेरै सन्‍तहरूलाई मैले झ्‍यालखानमा हालेको मात्र होइन, तर तिनीहरूलाई मार्दा तिनीहरूकै विरुद्धमा मैले मेरो मत पनि दिएँ।
“यसरी मुख्‍य पूजाहारीहरूबाट अख्‍तियार र आज्ञा पत्र पाएर म दमस्‍कसतिर गएँ।
किनकि तिनीहरूले परमेश्‍वरको सत्‍यतालाई झूटसँग साटेर सदासर्वदाका परमधन्‍य सृष्‍टिकर्तालाई त्‍यागेर बरु सृष्‍टि गरिएका थोकहरूको पूजा र सेवा गरे।
यो अनुग्रह अन्‍यजातिहरूका निम्‍ति परमेश्‍वरका सुसमाचारको पूजाहारीले गर्नुपर्ने कर्तव्‍य पालन गर्नलाई मलाई दिइएको हो, ताकि अन्‍यजातिहरू पवित्र आत्‍माद्वारा शुद्ध भएर ग्रहणयोग्‍य बलि बन्‍न सकून्‌।
१ कोरिन्थी ८:७
तापनि सबै मानिसमा त यो ज्ञान हुँदैन। तर कति मानिसहरूलाई मूर्तिपूजाको यति बानी बसेको हुन्‍छ, कि तिनीहरूले यस्‍तो भोजन खाँदा साँच्‍चै मूर्तिलाई चढ़ाएको भनिठान्‍छन्, र तिनीहरूको विवेक दुर्बल भएकोले अशुद्ध बन्‍छ।
१ कोरिन्थी १०:१४
यसकारण मेरा प्रिय हो, मूर्तिपूजाबाट अलग बस।
मूर्तिपूजा, मन्‍त्रतन्‍त्र, दुश्‍मनी, झैँझगड़ा, ईर्ष्‍या, क्रोध, स्‍वार्थीपन, फूट, गुटबन्‍दी,
यसैकारण हरेक कुरामा उहाँ आफ्‍नै भाइहरूजस्‍तै बनाइनुपर्‍यो, र मानिसहरूका पापको प्रायश्‍चित गर्नलाई परमेश्‍वरको सेवामा उहाँ कृपालु र विश्‍वस्‍त प्रधान पूजाहारी बन्‍नुभयो।
यसकारण स्‍वर्गीय बोलावटमा सहभागी भएका पवित्र भाइ हो, हामीले दृढ़ स्‍वीकार गरेका प्रेरित तथा प्रधान पूजाहारी येशूलाई विचार गर।
आकाश छिचोलेर जानुभएका परमेश्‍वरका पुत्र येशू हाम्रा महान्‌ प्रधान पूजाहारी हुनुभएको हुनाले हामीले पक्‍कासँग स्‍वीकार गरेको यो विश्‍वास थामिराखौं।
किनकि हाम्रा प्रधान पूजाहारी हाम्रो दुर्बलतामा हामीसँग सहानुभूति देखाउन नसक्‍ने हुनुहुन्‍न। तर हामीजस्‍तै उहाँ सबै कुरामा परीक्षित हुनुभयो, र पनि पापरहित हुनुहुन्‍थ्‍यो।
प्रत्‍येक प्रधान पूजाहारी मानिसहरूमध्‍येबाट छानिन्‍छ, र मानिसहरूको पक्षमा पापको निम्‍ति परमेश्‍वरमा भेटी र बलिदानहरू चढ़ाउन नियुक्त गरिन्‍छ।
ख्रीष्‍टले पनि प्रधान पूजाहारी हुन आफैले आफैलाई उच्‍च पार्नुभएन, तर उहाँलाई यसो भन्‍नुहुनेबाट नियुक्त हुनुभयो, “तिमी मेरा पुत्र हौ, मैले नै आज तिमीलाई जन्‍माएको छु।”
अर्को ठाउँमा पनि उहाँ भन्‍नुहुन्‍छ, “मल्‍कीसेदेकको दर्जाबमोजिम तिमी सधैँभरिको निम्‍ति पूजाहारी हौ।”
मल्‍कीसेदेकको दर्जाअनुसार प्रधान पूजाहारीको पदमा परमेश्‍वरद्वारा उहाँ नियुक्त हुनुभयो।
जहाँ हाम्रा पक्षमा अग्रदूत भएर मल्‍कीसेदेकको दर्जाअनुसार येशू प्रधान पूजाहारी भई प्रवेश गर्नुभएको छ।
यिनै मल्‍कीसेदेक शालेमका राजा र सर्वोच्‍च परमेश्‍वरका पूजाहारी थिए। राजाहरूलाई परास्‍त गरेर फर्कंदा यिनले अब्राहामलाई भेटे, र तिनलाई आशीर्वाद दिए।
विनापिता, विनामाता, विनावंशावली, जीवनको आदि र अन्‍त्‍य नभएका, तर परमेश्‍वरका पुत्र स्‍वरूप, यिनी सदाकाल पूजाहारी भइरहन्‍छन्‌।
पूजाहारी पदमा नियुक्त भएका लेवी वंशका मानिसहरूले आफ्‍नै दाजुभाइहरूबाट दशांश लिने आज्ञा व्‍यवस्‍थाबमोजिम पाएका थिए, यद्यपि तिनीहरू पनि अब्राहामकै सन्‍तान थिए।
अब यदि लेवीको पूजाहारी पदद्वारा सिद्धता प्राप्‍त हुँदो हो त (किनभने यसैको आधारमा मानिसहरूलाई व्‍यवस्‍था मिलेको थियो) हारूनको दर्जाबमोजिम नै नभएर फेरि मल्‍कीसेदेकको दर्जाअनुसार अर्को पूजाहारी खड़ा हुनलाई के जरूरत पर्थ्‍यो?
किनकि पूजाहारी पद बद्‌लिँदा व्‍यवस्‍था पनि बद्‌लिनैपर्छ।
किनभने यो प्रष्‍टै छ, कि हाम्रा प्रभु त यहूदाको कुलबाट उत्‍पन्‍न हुनुभएको हो। यस कुलको विषयमा पूजाहारीहरूका सम्‍बन्‍धमा मोशाले केही पनि भनेका छैनन्‌।
यदि मल्‍कीसेदेकजस्‍तै अर्को पूजाहारी खड़ा हुने हो भनेता यो कुरा अझ बढ़ी प्रष्‍ट हुन्‍छ,
जो पुर्ख्‍यौलीसम्‍बन्‍धी नियमको आधारमा होइन, तर अविनाशी जीवनका शक्तिको आधारमा पूजाहारी बनेका छन्‌।
किनकि उहाँको गवाही यो छ, “मल्‍कीसेदेकको दर्जाबमोजिम तिमी सधैँभरिको निम्‍ति पूजाहारी हौ।”
अघि पूजाहारी हुनेहरूले त साँच्‍ची नै विनाशपथ पूजाहारीको पद लिएका थिए, तर उहाँचाहिँ शपथसहित पूजाहारी बन्‍नुभयो, र उहाँको विषयमा परमेश्‍वर भन्‍नुहुन्‍छ, “परमप्रभुले शपथ खानुभएको छ, र आफ्‍नो मन बदल्‍नुहुनेछैन, ‘तिमी सधैँभरिको निम्‍ति पूजाहारी हौ’।”
अघिका पूजाहारीहरू धेरै संख्‍यामा थिए, किनकि मृत्‍युले तिनीहरूलाई कार्यमा लागिरहन दिँदैनथ्‍यो।
तर येशूचाहिँ अनन्‍त हुनुभएकोले उहाँको पूजाहारी पद अटल रहन्‍छ।
किनकि यो उचित थियो कि हाम्रा लागि यस्‍ता एक जना प्रधान पूजाहारी हुनुपर्दछ, जो पवित्र, दोषरहित, निष्‍कलङ्क, पापीहरूबाट अलग र स्‍वर्गभन्‍दा पनि माथि उचालिएका हुनुहुन्‍छ।
अरू प्रधान पूजाहारीहरूले जस्‍तै पहिले आफ्‍नै पापको निम्‍ति र त्‍यसपछि मानिसहरूका पापको निम्‍ति उहाँले दिनहुँ बलिदान चढ़ाइरहनुपर्दैन। आफैलाई अर्पण गरेर उहाँले यो काम सधैँको निम्‍ति एकै पल्‍टमा पूरा गरिदिनुभयो।
किनकि व्‍यवस्‍थाले दुर्बल मानिसहरूलाई प्रधान पूजाहारी नियुक्त गर्छ, तर सदासर्वदाको निम्‍ति सिद्ध तुल्‍याइनुभएको परमेश्‍वरका पुत्रलाई व्‍यवस्‍थाभन्‍दा पछि आएको शपथको वचनले नियुक्त गर्छ।
अब हामीले भन्‍न चाहेको कुराचाहिँ यही हो: हाम्रा यस्‍ता प्रधान पूजाहारी हुनुहुन्‍छ, जो स्‍वर्गमा महान्‌ परमेश्‍वरका सिंहासनको दाहिनेपट्टि विराजमान हुनुहुन्‍छ।
किनकि हरेक प्रधान पूजाहारी भेटी र बलिदान चढ़ाउन नियुक्त भएका हुन्‍छन्‌। यसकारण यी प्रधान पूजाहारीसँग पनि अर्पण गर्ने केही सामग्री हुनु आवश्‍यक छ।
उहाँ यस पृथ्‍वीमै हुनुहुँदो हो त उहाँ पूजाहारी हुनुहुने नै थिएन, किनभने व्‍यवस्‍थाबमोजिम भेटी चढ़ाउने पूजाहारीहरू त छँदैछन्‌।
अब यी कुराहरूको प्रबन्‍ध गरिसकेपछि पूजाहारीहरू आफ्‍ना विधि र कर्तव्‍य पालन गर्दै निरन्‍तर बाहिरपट्टिको पवित्रस्‍थानभित्र प्रवेश गर्थे।
तर भित्रपट्टिको कोठामा भने प्रधान पूजाहारी मात्रै एकलै वर्षमा एक चोटि जान्‍छन्, सो पनि रगत नलगी होइन। त्‍यो रगत उनले आफ्‍नो निम्‍ति र मानिसहरूका पापको निम्‍ति चढ़ाउँछन्‌।
जब ख्रीष्‍ट अघिबाटै आइसकेका असल कुराहरूका प्रधान पूजाहारी भएर आउनुभयो, उहाँ अझ महान्‌ र सिद्ध पवित्र वासस्‍थानद्वारा जानुभयो, जो हातले बनेको होइन, अर्थात्‌ यस सृष्‍टिको अङ्ग होइन।
येशू आफैलाई बारम्‍बार बलि चढ़ाउन स्‍वयम्‌ पस्‍नुभएको होइन, जसरी प्रधान पूजाहारी सालिन्‍दा आफ्‍नै रगत होइन, तर अर्काको रगत लिएर महापवित्र स्‍थानभित्र प्रवेश गर्ने गर्दछन्‌।
हरेक पूजाहारी एकै किसिमको बलि बारम्‍बार चढ़ाउँदै प्रतिदिन सेवामा खड़ा रहन्‍छ, जुन बलिले कहिल्‍यै पाप हरण गर्न सक्‍दैन।
परमेश्‍वरको घरानामा हाम्रा एक जना महान्‌ पूजाहारी हुनुभएको हुनाले,
प्रधान पूजाहारीले पापबलिको निम्‍ति जनावरको रगत महापवित्र स्‍थानमा ल्‍याउँछन्, तर तिनका शरीरचाहिँ छाउनीबाहिर लगेर जलाइन्‍छन्‌।
तिमीहरू पनि येशू ख्रीष्‍टद्वारा परमेश्‍वरको दृष्‍टिमा ग्रहणयोग्‍य आत्‍मिक बलिदान चढ़ाउने पवित्र पूजाहारीगिरीको निम्‍ति जीवित पत्‍थरहरूझैँ आत्‍मिक घर बन्‍दैजाओ।
तर तिमीहरू त चुनिएका वंश, राजकीय पूजाहारीगिरी, पवित्र जाति, परमेश्‍वरका निजी प्रजा हौ। उहाँले तिमीहरूलाई अन्‍धकारदेखि उहाँका उदेकको ज्‍योतिमा ल्‍याउनुभयो, ताकि तिमीहरू उहाँका आश्‍चर्यपूर्ण कार्यहरूको घोषणा गर्न सक।
बितेका दिनमा अन्‍यजातिहरूले गरेझैँ तिमीहरूले व्‍यभिचार, कुवासना, मद्यपान, मोजमज्‍जा, पियक्‍कड़पन र घृणित मूर्तिपूजामा प्रशस्‍त समय बितायौ।
हामीलाई एउटा राज्‍य, उहाँका पिता र परमेश्‍वरका पूजाहारीहरू तुल्‍याउनुहुने, उहाँलाई महिमा र पराक्रम सदासर्वदा होस्‌। आमेन।
र तिनीहरूलाई राज्‍य र हाम्रा परमेश्‍वरका पूजाहारी बनाउनुभएको छ, र तिनीहरूले पृथ्‍वीमा राज्‍य गर्नेछन्‌।”
मानिसहरूले अजिङ्गरको पूजा गर्दथे, किनकि त्‍यसले आफ्‍नो अधिकार पशुलाई दिएको थियो। तिनीहरूले यसो भन्‍दै पशुको पूजा गरे, “यो पशुजस्‍तो अरू को छ? यसको विरुद्धमा को लड्‌न सक्‍ने?”
र पृथ्‍वीमा वास गर्ने सबैले त्‍यस पशुको पूजा गर्नेछन्, अर्थात्‌ तिनीहरूले, जसको नाउँ संसारको सृष्‍टिदेखि नै मारिनुभएका थुमाका जीवनको पुस्‍तकमा लेखिएको छैन।
त्‍यसले पहिलो पशुको उपस्‍थितिमा त्‍यही पशुको सारा अधिकार चलाउँदथ्‍यो, र पृथ्‍वी र त्‍यसका सम्‍पूर्ण बासिन्‍दाहरूलाई पहिलो पशुको पूजा गर्न लाउँथ्‍यो, जसको घातक चोट निको भएको थियो।
तिनीहरूका यातनाको धूवाँ सदासर्वदा मास्‍तिर गइरहनेछ। तिनीहरू यी नै हुन्‌ जसले त्‍यो पशु र त्‍यसको मूर्तिलाई पूजा गर्छन्, र त्‍यसका नाउँको छाप लिन्‍छन्‌। तिनीहरूले दिनरात कहिल्‍यै पनि आराम पाउनेछैनन्‌।”
तब त्‍यो पशु र त्‍यसको उपस्‍थितिमा अचम्‍म काम गर्ने झूटो अगमवक्ता दुवै पक्राउ परे। यी अचम्‍मका कामहरूद्वारा त्‍यस झूटो अगमवक्ताले त्‍यस पशुको छाप लिने र त्‍यसको मूर्तिको पूजा गर्नेहरूलाई बहकाएको थियो। यी दुवै जलिरहेको गन्‍धकको अग्‍नि-कुण्‍डमा जिउँदै फालिए।
तब मैले सिंहासनहरू र त्‍यसमाथि बस्‍नेहरूलाई देखें, जसलाई इन्‍साफ गर्ने अधिकार दिइएको थियो। तब येशूका गवाहीको निम्‍ति र परमेश्‍वरका वचनको निम्‍ति शिर काटिएकाहरू, र त्‍यो पशु र त्‍यसका मूर्तिको पूजा नगर्नेहरू र त्‍यसको छाप निधार वा हातमा नलगाउनेहरूका आत्‍माहरूलाई मैले देखें। तिनीहरू फेरि जीवित भए, र तिनीहरूले ख्रीष्‍टसँग एक हजार वर्षसम्‍म राज्‍य गरे।
पहिलो पुनरुत्‍थानमा सहभागी हुनेहरू धन्‍य र पवित्र हुन्‌। यिनीहरूलाई दोस्रो मृत्‍युको शक्तिले केही गर्न सक्‍दैन, तर तिनीहरू परमेश्‍वर र ख्रीष्‍टका पूजाहारी भएर उहाँसँग एक हजार वर्षसम्‍म राज्‍य गर्नेछन्‌।